Thuthukisa - kuyini? Le nkulumo ibhekisela inchubo lapho kukhona intuthuko, esikhundleni ubudala izingxenye izingxenye ukuze ngobuchwepheshe eziphambili. Enguqulweni, igama elithi "uthuthukise" lisho ukuthi "buyekeza". Iphinde kungaba ukwanda kanye sesimanje. Namuhla abantu basebenzisa amabili izinketho. Lokhu kuthuthukisa computer kanye sesimanje ye-computer siqu. Uma siyiqaphele ukhetho lwesibili, kungafaneleka ngaphezulu ngoba elithi kwamukeleke kangconywana. Nokho, igama elithi "yokuthuthukisa" eRussia alisetshenziswa ngokuvamile.
Ithuthukisa PC (ngcono; uthuthukise) - exchange of Kwezinye izingxenye ikhompyutha yempucuko kakhulu nelithi "namandla". onobuhle yamanje zenzelwe ku uhlelo Modular, angasetshenziswa ukwenza ngcono, futhi uthole okwengeziwe PC "enamandla", ukunciphisa utshalomali.
Ngaphansi kwalo umqondo ngesinye isikhathi angasetshenziswa ukuze kuthuthukiswe i-Windows. Nokho, lesi sihloko sizogxila "hardware"
Thuthukisa - kungcono ku computer yakho?
Uma uzizwa ubuhlungu lapho usebenzisa i-PC ne-computer uqobo siyasebenza ne ukungezwani zamabutho zokugcina ezidinga ukuthuthukiswa.
Akulona umuzwa emnandi okungase kuthintwe kwezinye izimo. Nazi ezinye izibonelo, okuyinto ngezinye izikhathi kwaphoqa ukucabanga mayelana nokuthuthukela ngabanye izingxenye computer:
Ekuqaleni kwaba zithathe isikhathi eside kunokujwayelekile.
Uma uphelelwa computer amaningi esebenza kancane, nge impendulo eside ukuba izenzo umsebenzisi. Okungukuthi, uma uchofoza inkinobho noma ilebula, nekhompyutha iyaphendula kulesi sicelo ngokushesha, kodwa kuphela nje ngemuva kwesikhathi esithile.
Uma uphelelwa imidlalo yanamuhla eliphezulu, PC iqala ukuba "bese wehlisa ijubane", okungukuthi, izinga ifreyimu qapha kakhulu low. inqubo Game akuyona iyunifomu, njengoba kufanele kube, futhi jerks. Leli khadi isiqophi akusho sihambisane falling uguqule idatha wakhe futhi ubonisa kubo njengendlela yokwelapha isimo.
Thuthukisa PC yakho udinga ukuqala ukwenzani wokugaya. Leli gama lisho indlela uyakwazi yokusingatha ikhodi futhi ikakhulu kunqunywa imisebenzi PC ekucubungululeni idatha.
Njengoba ezothatha isikhundla wokugaya
Sekuyisikhathi ukushintsha into! Popular kwentuthuko yesayensi ngokushesha angene ezweni lanamuhla, displacing kukhona okungahambi njengoba abasha futhi zisebenza kahle. Minyaka yonke, emisha kanye nenqubekela phambili kukhona nexhala ngezithunywa izingqondo abasebenzisi PC, okuvumela ukuba uthole injabulo okuthile okungavamile. yabajabulisa ngokukhethekile lwalabo abakhetha ukwenza izinguquko processor. Futhi lokho indlela ukusebenza okungokoqobo, ngeshwa, akubona bonke uyazi.
Ngaphambi kokwenza umkhiqizo CPU ethuthukisiwe, kufanele uqinisekise ukuthi umbadlana izosebenza naye. Uhlaka lwezimali ezikhokhwayo has a isokhethi ngokuba CPU. Ukuthi uxhumano yabo. motherboards ezahlukene enethiwekhi ezahlukene. Funda ifomu, engeke liphazamisane nomsebenzi we-webhusayithi nomkhiqizi umbadlana ngcono, Technical kwesigaba Ukusekela. Kukhona ungathola lonke ulwazi.
Khona-ke kubalulekile ukuba sicabangele ukuthi kungadingeka. Main - iyona processor yakamuva, okuyinto kuyabonakala namanje. Ukuba khona "Owakwami" nakanjani isipanji thermopaste, lapho ukushisa angasuswa pasta eside, uPhillips flat, aphakathi ububanzi screwdriver.
PC kuvaliwe, wakhipha yonke izintambo ngokuphelele, Phillips ukufakwa kokumqoka kuphela, uyasikrufulula nut, ushukumiseleka ohlangothini ikhava. Ukushintsha ohlangothini chassis ukuze cooler (fan) ukuthi ijikelezwe ubuso, futhi Ukunqamula ukuxhuma ikhebula le. Ngaphezu kwalokho isithakazelo kokungathembeki isigwedlo 4 (icala 2). Ngamunye wabo has umcibisholo. Ngakho, ukuze ukuhambisa ezipholile, kubalulekile ukuba bayasunduzana wabo nganxanye. Khona-ke fastener ngamunye liphuma khona. Akulula, kodwa into esemqoka - Ungeqisi it! ukuchofoza engaqinile unolwazi ukuthi yonke into ihamba endaweni efanele.
Lapho epholile isuswe, kubalulekile ukususa processor. Ngenxa yalesi kukhona latches ekhethekile. Processor entsha wenziwe, zisebenza amafutha ezishisayo, kanti kuthe ukuphola ifakiwe. Lesi sigaba selukhombisile ukuthi ukuthuthukiswa - ilula, ngisho noma udinga esikhundleni processor.
Kanjani ukuthuthukisa ikhadi isiqophi?
Ihluzo ikhadi - indlela oguqula sibalo ingcaca elondolozwe njenge okuqukethwe kwimemori PC (noma adaptha uqobo) ukumisa, efanelekayo okukhiphayo okwengeziwe ukuze isibonisi.
Ukuze afeze ikhadi yokuthuthukisa ihluzo azodinga ukufakwa kokumqoka kuphela nesikhathi. Okulandelayo inqanyuliwe zonke izintambo, uyasikrufulula imishudo futhi offset ikhava ohlangothini. isigaba sesethulo elikhishiwe Ingabe enamathiselwe ikhadi bese izibambo ezimbili isuswe ngokucophelela kusukela slot, okwenza ukunyakaza phezulu.
Esikhundleni ividiyo ekhishwe wafaka ikhadi elisha. Eduze ufakwa isixhumi kungenye. Egibele SLI-ibhuloho.
Screwed womabili amakhadi imbozwe futhi screwed ikhava ohlangothini ngemva kokuxhuma ezipholile. Ngu axube zonke izintambo, vula i-PC. Isaziso imishini yamuva ukuba kulindeleke ngokushesha ngemuva kokuqala kohlelo. Uma ufake umshayeli ukusitha, wena umane ufaka bayifaka drive, ekupheleni uqalisa ukhetha "Faka umshayeli".
Uma ukufaka kwenziwa kusukela hard drive, kubalulekile ukuya indawo lapho yayikade ukulandwa, futhi chofoza kabili-isiqalo.
Ngakho, singaphetha ngokuthi kokuthuthukisa - akuyona inkimbinkimbi ezinjalo. Futhi kule igobolondo ubudala, kungenzeka ukuthi abelane Kwezinye izingxenye ngabanye abasha. Ngakho, ukuthuthukisa amasu nendlela yakhe ozithandayo. Futhi kokuthuthukisa ezenziwe ngezandla zakho siqu, asisindise i penny extra, okungase linamathele hardware entsha.
Indlela ukufaka futhi ususe yaphansi eZwini
Indlela uvala "Youtube" wengane: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo, izincomo kanye nokubuyekeza
Bars Kirov: amakheli kanye nezici
Eliphezulu ifayela nail Cuticle - isiqinisekiso manicure omkhulu ekhaya